Besca Cable tireyi
BC3 manera tireyi
BC4 manera tireyi
Wire Mesh Cable tireyi
vanofamba Pamativi Channel
U Fittings uye Base
Oil & Gas Nechezasi
Kushanda BC3 / BC4 Cable tireyi
Aluminum vanofamba Pamativi, Cable dzacho uye manera
BC1 / 2/5/6 Cable tireyi
BC3 Cable tireyi (H = 50)
BC4 Cable tireyi (H = 50)
BL1 / 2/3 Steel Cable manera
NEMA 12b / 16a / 20b / 20C Steel Cable manera
Marine Cable manera
NEMA 20C / BL4 Cable manera Aluminum
Cover Cable manera
BL5 / 6 FRP Cable manera
BM1 / 2/3 Wire Mesh Cable tireyi
BM4 / 5/6 Wire Mesh Cable tireyi
Bhaira & Pressure Mudziyo Steel
Low chiwanikwa High Strength Steel
High Strength & kusimba Steel
Hasha Nemishonga Steel
INFORMATION PACHIKAMU AND SHANDISA
Shanghai Besca Industrial Co., Ltd anoremekedza renyu zvakavanzika uye awane yako paIndaneti uchengetedzwe zvakakomba. Kuti kukupa zvakanakisisa zvigadzirwa, basa vatengi, uye vakatsanya reserved, tinyore zvakasiyana-siyana mashoko kubva kushanya kwenyu yedu yepaIndaneti. Kudzivirira nani wenyu zvakavanzika, tinoda kutsanangura dzedu paIndaneti ruzivo tsika uye nzira ruzivo rwenyu inounganidzwa uye kushandiswa.
Tinokutenda angadaro ari Website ose (nzvimbo kero: https://www.bescatray.com/ ). Tinoremekedza wako zvakavanzika uye vanoda kudzivirira mashoko ako pachako. Kuti udzidze zvakawanda, tapota verenga yedu Privacy Notice
Izvi Privacy Notice anotsanangura sei isu vaunganidze, kushandisa, uye (pasi zvimwe ezvinhu) pachena mashoko ako pachako. Izvi Privacy Notice anotsanangurawo matanho takatora kuwana ruzivo yako pachako. Pakupedzisira, izvi Privacy Notice anotsanangura zvaunogona kusarudza panyaya pokuunganidzira, kushandiswa, uye Kuziviswa kwemashoko enyu pachako. By kushanyira Site yedu, imi kubvuma tsika anorondedzerwa Notice ichi.
Izvi Privacy Notice rinongoshandisirwa Site ichi. Izvi zvinhu zvemumwe hazvireve anoshandawo yedu is muunganidzwa mashoko ako pachako. Tapota ona pazasi kuti mashoko. Hatina mhosva kugutsikana kana toga miitiro chero vasiri https://www.bescatray.com/ Website iyo Site ichi anobatanidza kuti kana kuti inoratidza edu nzvimbo.
MASHOKO PACHIKAMU AND SHANDISA
1. Information Collection. We unganidza ruzivo kubva kwamuri nenzira dzakasiyana pamusoro Site ichi. Chimwe chinangwa nekunhonga zvemunhu kubva kwamuri kuti pave kwekuva inoshanda, chinangwa, uye customized ruzivo. Somuenzaniso, tinogona kushandisa mashoko yako pachako kuti:
Batsirai kuti Site ichi nyore kuti kushandisa kubudikidza vasina kupinda ruzivo kamwe zvakare.
Kukubatsira nokukurumidza kuwana ruzivo, zvigadzirwa, uye mabasa.
Tibatsirei kusika tigutsikane pamusoro Site ichi kuti chinonyanya kushanda kwamuri.
Alert kuti mashoko matsva, zvigadzirwa, uye mabasa kuti tinopa.
Kazhinji, haufaniri kupa ruzivo rako pachako kushanyira nzvimbo iyi. Zvisinei, kuti kuvandudza basa, kambani kungada kuti kupa ruzivo pachavo inokodzera Company kunyatsonzwisisa zvaunoda kukushumirai, imwe nguva, kuti Company kodzero kutora matanho asimbise pachako mashoko iwe zvinopa nderechokwadi. Kana mashoko nezvevamwe pachako, ipapo makaita chakarongwa kufarirwa nevamwe. Zvipikirwa kambani, kunze kwemunyika zvido zvenyu, kambani haangavi mashoko ako pachako kuti Company dzaro Affiliates chero pati rechitatu.
2. Information Use uye Kubuda pachena.
(a) Internal Use. Tinoshandisa mashoko ako pachako kuti ironge hurongwa hwako uye kukupa vatengi. Tinogona nechomukati kushandisa mashoko ako pachako kuvandudza vedu Site kugutsikana uye marongerwo, kuvandudza ngavasununguke yedu uye nokuda kwedu yokutengesa kuedza (kusanganisira Marketing mabasa edu uye zvigadzirwa kwamuri), uye kuona mukuru pamusika ruzivo pamusoro vaishanya Site ichi.
(b) Communications nemi: Tichashandisa mashoko ako pachako kukurukura nemi pamusoro nzvimbo yedu, uye zvirevo zvenyu uye vazvo. Uyewo, tinogona ndikutume zvinosimbisa mail kana iwe kunyoresa nesu.
(c) External Use. Tinoda kukupa basa wakanakisisa uye kupa newe Kusarudzwa kukuru - isu kunyanya kutengesa vashambadzirane, kwete mashoko. Hatidi kutengesa, rendi, kutengeserana, rezinesi, kana zvimwe pachena mashoko enyu chaiwo pachako kana mashoko zvemari munhu.
Site ichi chinayo mumuviri, zvemagetsi, uye okutarisira matanho kuchengetedza zvakavanzika mashoko wako, kusanganisira Akachengeteka nezvigadziko rukoko ( "SSL") nokuda kwacho zvose kuburikidza Site ichi. Tinoshandisa SSL encryption kudzivirira mashoko ako pachako paIndaneti, uye nesuwo kutora matanho akawanda kudzivirira mashoko ako pachako pane zvivako zvedu. Kuwana ruzivo rako pachako kurambidzwa. vashandi chete vanoda kuwana ruzivo rako pachako kuita yakananga basa vanopiwa kuwana mashoko ako pachako. Pakupedzisira, tinovimba rechitatu-party basa rinobatsirwa mumuviri kuchengeteka vamwe kombiyuta yedu Hardware. Tinotenda kuti avo kuchengeteka maitirwe ezvinhu zviri zvakakwana. Somuenzaniso, kana iwe kunoshanyira Site yedu, imi kuwana servers kuti pavanoramba yakachengeteka Mhoteredzo, kuseri akakiyiwa keji uye wemagetsi firewall.
Patinenge kushandisa indasitiri-mureza matanho kuchengetedza ruzivo rako pachako, hatigoni nechokwadi kuchengeteka kwakakwana. 100% kuchengeteka kwakakwana anoita vasiri kurarama kumwe paIndaneti kana offline.